PinePhone Mobian Nharaunda Yekushambadzira Yakagara Yaziviswa | Linux Vakapindwa muropa
PinePhone Mobian Nharaunda Yenharaunda yatove yakaziviswa
Nharaunda yePine64 yakazivisa mazuva akati wandei apfuura iyo kuiswa kwePinePhone Mobian Community Edition, iyo inouya neMobian-based firmware, iyo inovandudza nharembozha yeDebian GNU / Linux.
Nzvimbo inosanganisira yeGNOME-yakavakirwa tsika Phosh goko rakagadzirwa nePurism yeLibrem 5. smartphone. Inoshandisa Phoc composite server inomhanya pamusoro peWayland pakupa.
Iyo Mobian Edition inozadzisa imwe PinePhone smartphone akasiyana yakamboburitsa chikepe icho ne postmarketOS, KDE Plasma Mobile, UBports / Ubuntu Touch, uye Manjaro.
Zvishandiso zvekutanga zvinosanganisira Evince Gwaro Rekutarisa, GEdit Chinyorwa Edhiyo, Ziso reGnome Image Viewer, GNOME Software Kuisa Maneja, GNOME ToDo Notes Sisitimu, ModemManager GSM / CDMA / UMTS / EVDO / LTE Modem Configuration Interface, GNOME Kero Kero Kero, Inzwi Rekuda GNOME, GNOME Control Center Configurator, GNOME Usage Monitor, Geary Email Mutengi, Fractal Messenger (yakavakirwa paMatrix protocol). Kudzora mafoni, iyo Inoshevedza interface inoshandiswa, iyo inoshandisa iyo ooono foni stack.
Iwo maficha akaunganidzwa pamwe ne libhandyy widget raibhurari uye zvigamba kubva kuPurism chirongwa chakanangana nekuvandudza chimiro pane zvidiki zvidyarwa. Chero pakeji inogona kuiswa kubva kuDebian repositories.
Goredzva Rakanaka kune vese! Ngatitarisirei kuti matambudziko anokonzerwa nehutachiona hweCOVID-19 ari kudzikira uye kuti zvimwe zvikamu zvehupenyu hwedu zvichadzokera pane zvakajairwa munguva pfupi iri kutevera.
Takatanga gore rino nekuzivisa yazvino nharaunda vhezheni yePinePhone, inogadzirisirwa Quartz64 imwechete bhodhi makomputa, uye nedzimwe nhau dzakanaka pamusoro pekugadzirwa kwePineTab nePinebook Pro.
Iwe unogona kuona chirevo cheMwedzi uno Yemunharaunda Yenharaunda paYouTube (yakaiswa pazasi), asi zvakare paLBRY naPeertube.
Ngatirangarirei kuti iyo Hardware PinePhone yakagadzirirwa kushandisa zvinotsiviwa zvinhu uye mazhinji emamojuru haana kutengeswa, asi akabatana netambo dzinogona kutsvagika, izvo zvinobvumidza, semuenzaniso, kutsiva kamera inopihwa nekutadza neyakanakisa.
Chishandiso chakavakirwa pane quad-core ARM Allwinner A64 SoC ine Mali 400 MP2 GPU, yakashongedzwa ne2 kana 3 GB ye RAM, 5,95-inch screen (1440 × 720 IPS), Micro SD (ine rutsigiro rwekutakura kubva kune SD kadhi ), 16 kana 32 GB eMMC (yemukati), chiteshi che USB-C chine USB Inobata uye yakabatanidzwa vhidhiyo kuburitsa yekubatanidza monita, 3,5 mm mini-jack, Wi-Fi 802.11 b / gn, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS , GPS-A, GLONASS, makamera maviri (2 ne5 Mpx), inobviswa 3000 mAh bhatiri, zvigadzirwa zvinoshandurwa zvehurdware zvine LTE / GNSS, WiFi, maikorofoni uye masipika.
Iko kutsigirwa kwehardware kwakanyatso nzwisisika uye painenge ichiri kuda kukwenenzverwa munzvimbo dzinoverengeka, iwe unozogona kunakidzwa nekushanda kuzere kwefoni (kusanganisira izwi kudana, SMS, nharembozha, Broadband, WiFi, kumberi uye kumashure kamera…) kubva pazuva Poshi.
Zvisinei, ramba uchifunga kuti software ichiri mumabasa uye inoshanduka ingangoita zuva nezuva. Chishandiso chako chinosvika nemufananidzo wemwedzi yakawanda, saka tinogona kungokurudzira kuti iwe uvandudze PinePhone yako nekukurumidza sezvinobvira kutora mukana wenhau dzichangoburwa
Pakati peshanduko dzakanangana nePinePhone chirongwa, isu tinogona zvakare kusimbisa kuburitswa kweyeyedzo vhezheni ye firmware zvichibva pane OpenMandriva Lx 4.2 kugoverwa netsika KDE Plasma Mobile ganda uye nyowani Linux 5.10 kernel.
Pamusoro peOpenMandriva Lx uye Mobian, mifananidzo yebhoti iri kugadzirirwa PinePhone zvichibva pa postmarketOS, KDE Plasma Mobile, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile uye papuratifomu yakavhurika Sailfish. Izvo zvinotaurwa zvakare kuti basa riri kuitwa kugadzirira shanduro neNixOS.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira mutsva mutsva werunhare «Mobian Nharaunda Yekutsikisa«, Vanofanira kuziva kuti izvi inowanikwa izvozvi uye ichauya nemhando dzakasiyana dzemadhora gumi nemana9 (2 GB RAM + 16 GB eMMC) uye $ 199 (3 GB RAM + 32 GB eMMC + USB Type-C adapta yekubatanidza kune yekutarisa, network, keyboard uye mbeva (HDMI, 10/100 Ethernet uye maviri USB 2.0 madoko )).
Ivo vanogona kuhodha foni kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone Mobian Nharaunda Yenharaunda yatove yakaziviswa
Mhoroi, mubvunzo nekuti ini ndarasika zvishoma mune idzi linux nhare, ndeipi yakanakisa?
Krita 4.4.2 inosvika uye inoramba ichiwedzera maturusi, mafirita uye nekuvandudza kwakasiyana
JingOS inopfekedza yako inoshandurwa neiyo iPadOS sutu inovhara muviri waUbuntu